အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ရင်ကိုဝုန်းဒိုင်းကြဲအောင် အမြဲ လုပ်တတ်တဲ့ ခေးကြီးလုကတော့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ စွဲဆောင်လိုက်ပြန်ပြီ – Online News Post
အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ရင်ကိုဝုန်းဒိုင်းကြဲအောင် အမြဲ လုပ်တတ်တဲ့ ခေးကြီးလုကတော့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ စွဲဆောင်လိုက်ပြန်ပြီ
မော်ဒယ်လ် လုလုအောင် က တော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ ရင်ထဲ မှာ နေရာ တစ်ခုကို ရယူထား နိုင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို အချိန် အတော် ကြာလုပ်ကိုင် လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ဖြစ်ကာ ကြော်ငြာ တွေများစွာ ကိုလည်း ရိုက်ကူး လျက် ရှိနေသူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေ မှာလည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင် လျက် ရှိနေတဲ့ သူမကတော့ မော်ဒယ်လ် ပီပီ သွယ်လျ လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။
အပြုံး လေးတွေ နဲ့ ပရိသတ် တွေရဲ့ အသည်း တစ်ခြမ်းကို ဖမ်းစား ထားနိုင်တဲ့ သူမ က တော့ အသား အရေ စိုပြေပြီး ယနေ့ အချိန်ထိ နုပျို လှပကာ လှသွေးကြွယ် နေဆဲ ဖြစ် ကာ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ Single Mother အဖြစ် ခံယူထားပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ တစ်ဦး တည်းသော သမီးလေး တစ်ယောက် ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ သူမ က တော့ ရင်ခုန် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်ကို တင်ပေးလေ့ ရှိနေတာ ပဲဖြစ် ပါ တယ် ။
သူမ က တော့ ဝင်းမွတ်ဖြူဖွေးတဲ့ အလှတရား လေး ပေါ်လွင် နေပြီး အိမ်နေရင်း ပုံစံလေးနဲ့ တောင် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ လှပကာ အသည်းယား စရာကောင်း လွန်းနေ ခဲ့ပါတယ် ။ ဆယ်ကျော်သက် လေးလိုလှပ နေခဲ့ တဲ့ သူမ ရဲ့ ချစ်ရာပုံရိပ် လေး တွေဟာ ပရိသတ် တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါ တယ် ။ ချစ်ပရိသတ် တွေအ တွက် မော်ဒယ်လ် လုလုအောင် ရဲ့ အိမ်နေရင်း ပုံစံနဲ့ ချစ်စရာကောင်း နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကိုပြန်လည် ဖော်ပြ ပေး လိုက်ရ ပါ တယ် … .
ေမာ္ဒယ္လ္ လုလုေအာင္ က ေတာ့ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ရင္ထဲ မွာ ေနရာ တစ္ခုကို ရယူထား နိုင္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ကို အခ်ိန္ အေတာ္ ၾကာလုပ္ကိုင္ လ်က္ ရွိေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ကာ ေၾကာ္ျငာ ေတြမ်ားစြာ ကိုလည္း ရိုက္ကူး လ်က္ ရွိေနသူ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီးေတြ မွာလည္း ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရွိေနတဲ့ သူမကေတာ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ပီပီ သြယ္လ် လွပၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလြန္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။
အျပဳံး ေလးေတြ နဲ႔ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အသည္း တစ္ျခမ္းကို ဖမ္းစား ထားနိုင္တဲ့ သူမ က ေတာ့ အသား အေရ စိုေျပၿပီး ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ႏုပ်ိဳ လွပကာ လွေသြးႂကြယ္ ေနဆဲ ျဖစ္ ကာ ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ Single Mother အျဖစ္ ခံယူထားၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ တစ္ဦး တည္းေသာ သမီးေလး တစ္ေယာက္ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ သူမ က ေတာ့ ရင္ခုန္ စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြကို လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္ကို တင္ေပးေလ့ ရွိေနတာ ပဲျဖစ္ ပါ တယ္ ။
သူမ က ေတာ့ ဝင္းမြတ္ျဖဴေဖြးတဲ့ အလွတရား ေလး ေပၚလြင္ ေနၿပီး အိမ္ေနရင္း ပုံစံေလးနဲ႔ ေတာင္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ လွပကာ အသည္းယား စရာေကာင္း လြန္းေန ခဲ့ပါတယ္ ။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေလးလိုလွပ ေနခဲ့ တဲ့ သူမ ရဲ့ ခ်စ္ရာပုံရိပ္ ေလး ေတြဟာ ပရိသတ္ ေတြကို အခ်စ္ေတြ ပိုေစခဲ့တာ ပဲျဖစ္ပါ တယ္ ။ ခ်စ္ပရိသတ္ ေတြအ တြက္ ေမာ္ဒယ္လ္ လုလုေအာင္ ရဲ့ အိမ္ေနရင္း ပုံစံနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္း ေနတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကိုျပန္လည္ ေဖာ္ၿပ ေပး လိုက္ရ ပါ တယ္ … .
Previous post ကြည့်ရှုသူတိုင်း သဘောကျသွားမယ့် ရွှေသမီးရဲ့ Tik Tokဟာသ အလွဲ ဗီဒီယိုလေး
Next post အပြင်းစားလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ရင်းကကိတ်လွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှလေးတွေကိုပါ ပြသလိုက်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို